Marketingre ahịa na Ahịa Real Estate | Martech Zone
Marketingre ahịa n’ahịa azụmaahịa siri ike
Sunday, December 21, 2008 Sunday, October 4, 2015 Douglas Karr
Tinye n'ọrụ teknụzụ dị n'ịntanetị dịka a ajụ maka ahia bu niche na-eto eto. Ndị ahịa na-amakarị banyere iji mgbasa ozi mmekọrịta iji nyere aka kụziere onwe ha mkpebi mkpebi.
N'inwe ahia ụlọ ebe a na mba niile na mkpofu, ọ bụ ihe dị adị na ndị ọrụ ụlọ na ndị ahịa na-achọ ịzụta amalitela iji tontanetị eme ihe. Azụla m ma rere ụlọ ole na ole n'oge gara aga ma ghọta n'oge na ịchọta onye nnọchi anya bụ mkpebi kacha mma anyị mere! Ọ zọpụtara ezinụlọ m ọtụtụ puku dollar ma mee ka ihe niile were nwayọ.
Uzochukwu bụ n'ọma ahịa ebe ndị ezigbo ụlọ na-agwa mmadụ ka ọ nweta ohere ịrụ ọrụ na ndị na-azụ ụlọ. Ndị ahịa na-ezute ndị nnọchi anya ụlọ na-aga nke ọma na-enyere aka na usoro ịzụta ụlọ ma nye ha nkwụghachi.
Pịa site na post a ma ọ bụrụ na ịhụghị vidiyo na otú DoorFly si arụ ọrụ!
I nwere ike ịgụtakwu banyere otu echiche a si mezuo na blog DoorFly. Nnukwu ihe banyere DoorFly bụ na ọ na-ejere onye zụrụ ụlọ na onye na-ere ahịa ụlọ ozi. N’ahịa a siri ike, ejiri m n’aka na onye na-ajụ ihe ga - ejikọ ha abụọ nọ n’ọchịchọ dị elu!
M na-ezute na DoorFly otu ihe karịrị ọnwa ole na ole gara aga na ha nwere obi ụtọ banyere azụmahịa na ohere ịmeghara ọdịiche a na ụlọ ọrụ ụlọ! Ana m atụ anya ịhụ mbido ụmụaka na-apụ apụ!
Indianapolis dị ka ahịa nnukwu mmalite maka teknụzụ ala na ụlọ! Yana Uzochukwu, enwere kwa:
OBU - URBaCS bụ ngwa ntanetị weebụ nke ndị nwe ụlọ na-eji kọọrọ ndị enyi na ndị ezinụlọ ha ahụmịhe ụlọ ha.
Njikọ Real SMS ala na ụlọ - Ngwá ọrụ ọhụụ na-ebu ụzọ na-eji ma ederede ederede ma na-enyefe ọnụ ọgụgụ na-akwụghị ụgwọ iji hụ na ozi ụlọ dịịrị ndị na-achọ ịzụta.
Eachlọ ọrụ ọ bụla na-arụ ọrụ niche dị iche na Estlọ Ala mana ha niile na-enye ahịa azịza pụrụ iche nke na-enyere aka ịre ahịa ụlọ!
Tags: ọnyịnye ngwaahịa appletaabụ facebookmbosaassmmselekọta mmadụ media management usorowayaframing ngwaọrụ
Oge eruola itinye oge agha gị
Nlaazu bụ Usoro Achọrọ Azụmaahịa
Dee 22, 2008 na 10: 20 AM
Naanị iji maa mma - Enyochare m Doorfly iji hụ ihe ha na-enye. Ugbu a, na Indiana, ha nwere ndị ọrụ 6 na-arịọ otu onye zụrụ ahịa. Onye nzụrụ ahịa chọrọ ịzụta ụlọ maka $ 40,000 na ọnụ ọgụgụ kachasị elu bụ $ 500., nke m na-ekwu na ọ bụ onye na-azụ ahịa kachasị elu dị njikere iweghachi ma ọ bụ nyeghachi $ 500. nke ọrụ ha.
Nsogbu m nwere na nke a, bụ onye nnọchi anya ụlọ ọrụ amaghị n'ihu ọrụ ọrụ ya ga-abụ.
Nkwupụta: A naghị edozi Commlọrụ ma na-agbanwe agbanwe mgbe niile.
Ahụla m ka ọtụtụ ụlọ ndị nwe ụlọ akụ na-enye onyinye ọrụ ego dollar. N'okwu a, ka anyị kwuo na ha na-enye 3% ma ọ bụ $ 1200.00. Ikekwe, ha na-enye naanị $ 1000.00. N'ọnọdụ nke ọ bụla, onye ọrụ ahụ enyefela ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ọkara nke ọrụ ha n'amaghị ama awa ole ha ga-etinye. Ekwetaghị m na nke ahụ bụ oge amamihe dị na ya ma ọ bụ ọkachamara ọkachamara.
Aga m ekwe nkwa na ndị na-azụ ahịa ihe dị mma nwere ike ịkwado ahịa ka mma maka ndị ahịa ha karịa $ 500. Gbanyụọ ọrụ ahụ ma ọ bụ ọbụlagodi 50% nke ọrụ ahụ na $ 300,000. ulo. Ọ bụghị mgbe niile gbasara ego - mana ọrụ na nka mmadụ kwesịrị ịtụ anya.
Ihe Nlereanya - kedu ihe m na-ekwenye na 3% maka mmechi mmechi yana akụkụ nke ahụ ejiri zụta ọnụego ọmụrụ nwa site na .5%. On a $ 40,000 home, M zọpụta m ahịa $ 200.00 a afọ na mmasị naanị.
Enwere ọtụtụ ihe atụ nke otu esi echedo ma kwalite ndị ahịa gị ezigbo mmasị na azụmaahịa ụlọ iji banye ebe a, mana ekele maka ịhapụ m 2 cents. 🙂
Dec 22, 2008 na 1:33 PM
Nnukwu nzaghachi, Paula!
DoorFly na-arụ ọrụ nke okwu ọnụ ugbu a iji pụọ na ala, ndị mara mma nọ ebe ahụ amalitela nke a ka ha na-arụ ọrụ oge niile - nke ahụ dị mma mana ọ ga-ewe oge iji wuo ọtụtụ uzuoku.
Abụ m nnukwu onye na-azụ ndị ọrụ, yana ịsọ mpi na nhọrọ nke a na-eweta n'ahịa. Echeghị m na DoorFly na-ere ahịa ya niile n’akụkụ bidoro - ọ bụ maka ijikọ ndị ọrụ ziri ezi na ndị zụrụ ahịa maka ezi ụlọ.
Echere m na nke ahụ bụ ezigbo ihe nlereanya. Ọ na-enye ndị na-azụ ahịa nhọrọ na ndị nnọchi anya ya na onye na-ajụ ase iji jikọọ ndị ahịa ọhụrụ - ihe dị ụkọ ụbọchị ndị a!
Ezumike ezumike na ekele dịrị gị maka ntinye gị!
Dee 23, 2008 na 12: 45 AM
Daalụ maka njikọ ịhụnanya. Obi dị anyị ụtọ maka afọ 2009 maka na anyị na - ahụzi ndị na - ewu ụlọ ga - abanye ebe a na - elekọta mmadụ. Ọtụtụ ndị na-ewu ụlọ na-amalite ịde blọgụ, tweet na iji saịtị dịka Facebook na Flickr. Agbanyeghi na o yikarịrị ka 2009 ọ ga-adị umengwụ n'ihe gbasara ire ụlọ ọhụrụ anyị na-atụ anya ịhụ ka ndị na-ewu ụlọ na-aga n'ihu na mgbasa ozi ọhụụ.